Maqaallada Larry Alton ee Martech Zone |
Maqaallada by Larry Alton
Larry waa la-taliye ganacsi oo madax-bannaan oo ku takhasusay isbeddellada warbaahinta bulshada, ganacsiga, iyo ganacsiga. Raac isaga on Twitter iyo LinkedIn.
Ganacsiyada Online-ka ah waxay u Baahan Yihiin inay u Wareejiyaan Suuqgeynta Si ay Hore Ugu sii Jiraan
Jimco, Nofeembar 8, 2013 Larry Alton
Su’aal kama taagna in Internetku si aad ah isu beddelay sannadihii la soo dhaafay, taasina waa run sida ay shirkadaha u suuq geynayaan ganacsigooda internetka sidoo kale. Milkiile kasta oo ganacsi wuxuu u baahan yahay oo kaliya inuu eego tirada isbeddelada ay Google ku sameysay raadinta algorithm si ay u hesho faham aasaasi ah oo ku saabsan sida farsamooyinka suuqgeynta internetka ay isu beddeleen waqti ka dib. Shirkadaha ka ganacsada internetka waxay u baahan yihiin inay door muhiim ah ka ciyaaraan istiraatiijiyadooda suuqgeynta markasta oo isbeddel jiro
Waa maxay sababta Medium.com muhiim ugu tahay Istaraatiijiyadda Suuqgeyntaada
Isniin, Oktoobar 7, 2013 Arbacada, December 17, 2014 Larry Alton
Qalabka ugu fiican ee suuqgeynta internetka ayaa si joogto ah isu beddelaya. Si aad ula jaanqaado wakhtiyada, waxaad u baahan tahay inaad dhegtaada dhulka dhigto, si aad u soo qaadato qalabka ugu cusub uguna waxtarka badan ee loogu talagalay dhismaha dhagaystayaasha iyo isu-beddelka taraafikada. Istaraatijiyadaha qorista ee SEO waxay xooga saareysaa muhiimadda ay leedahay "koofiyad cad" waxyaabaha iyo wadaagista, sidaa darteed waxaad ka faa'iideysan kartaa baloogyada ganacsiga, bogagga internetka ee maamulka, iyo Twitter si aad u dhisto sumcaddaada dijitaalka ah. Barnaamijka dhexdhexaadka ah ee 'web' ayaa hadda soo saaraya
Dhibcaha Caddaynta ee Isku Xidhka SERP Ranking iyo Web Host
Jimco, Oktoobar 4, 2013 Larry Alton
Dabayaaqadii Ogosto, Matt Cutts wuxuu sharraxay in Google ay eegayso xawaaraha goobta iyada oo ah qodob meesha ay degel ka muuqato bogga natiijooyinka raadinta. Fiidiyowgiisa Webmaster Help, wuxuu ku yiri: “Haddii boggaaga runti, runti gaabis yahay, waxaan dhahnay waxaan ku isticmaalnaa xawaaraha bogga qiimeyntayada. Oo sidaas daraaddeed oo dhan oo ka mid ah waxyaabaha loo siman yahay, haa, site a darajo hoose karaa. “Hadda, waxaan u muuqan inaanan ka hadlin waxyaabaha qaab ahaan
Websaydhyada ayaa weli ah isha laga heli karo dakhliga dadban
Khamiista, Sebtember 19, 2013 Arbacada, December 17, 2014 Larry Alton
Haddii aad rumaysan lahayd wax kasta oo aad akhrido, bilaabidda degel si aad u kasbato dakhli dadban waxay noqon doontaa sabab lumisay maalmahan. Kuwa cadeeyay shahaadada dhimashada waxay eedeeyaan tartanka xad dhaafka ah iyo cusbooneysiinta Google sababaha dakhliga soojireenka dhaqameed, iyada oo loo marayo suuqgeynta kuxiran, aysan hadda aheyn ilo macquul ah oo lacag lagu helo. Si kastaba ha noqotee, qof kastaa uma muuqdo inuu helay qoraalka. Xaqiiqdii, weli waxaa jira dad badan oo shabakadda ah kuwaas oo
Marti-gelinta martida - Waxaad ku sameyneysaa si qaldan
Hal mar, backlinks ayaa xukumay adduunka hagaajinta mashiinka raadinta. Markii tayada barta lagu cabiray PageRank, backlinks waxay bixiyeen codad badan oo la raadinayay oo keenay cabirkan. Laakiin markii algorithm-ka Google uu qaan gaadhay, darajooyinka degelku kuma sii tiirsanaan karaan oo keliya tirada xiriiriyeyaasha dib u tilmaamaya. Tayada goobta martigalinaysa iskuxirka ayaa bilaabay inuu qaado culeys ka badan tirada badan ee xiriidhada degel